संसदको अवरोध कहिलेसम्म ? ओलीको जवाफ-चुनावसम्म - Naya Pageसंसदको अवरोध कहिलेसम्म ? ओलीको जवाफ-चुनावसम्म - Naya Page
संसदको अवरोध कहिलेसम्म ? ओलीको जवाफ-चुनावसम्म
मोरङ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा एमालेको अवरोध चुनावसम्मै रहने चेतावनी दिएका छन् । पार्टी विभाजन भएदेखि एमालेका सांसदहरूले सदनमा अवरोध गर्दै आएका हुन् ।
शनिबार विराटनगरमा पुगेका ओलीले पत्रकारहरूले संसद अवरोध कहिलेसम्म भनेर सोध्दा उनले भने, ‘चुनावसम्म’ । आफूहरूले पार्टीबाट ‘निष्कासन गरेका मान्छेहरू’ लाई राखेर सरकारले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि आफूहरू नजाने ओलीको जिकिर छ । कुराकानीको क्रममा अध्यक्ष ओलीले छिट्टै चुनाव गर्नुपर्ने बताए । ‘अर्ली इलेक्सन भए पनि नभए पनि इलेक्सन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘इलेक्सन भएपछि धोपीपाठ लगाइन्छ ।’
जसपाबाट निर्वाचित जहदा गाउँपालिका-७ का वडाध्यक्ष भगवानलाल बेसरालाई एमालेमा प्रवेश गराउन अध्यक्ष ओली मोरङ पुगेका हुन् । ओलीले एमालेको १०औं महाधिवेशनपछिका तीन महिना पार्टी प्रवेशको अभियान चलाउने बताएका थिए । यसअघि जनता समाजवादीको तर्फबाट वडा नं ४ का अध्यक्ष जयनरथ गिरी पनि एमालेमा प्रवेश गरेका थिए ।